Boqor Burhaan oo kulan la qaatay Qoyska Boqortooyada Zuluga ee Koonfur Afrika[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Boqor Burhaan oo kulan la qaatay Qoyska Boqortooyada Zuluga ee Koonfur Afrika[Sawirro]
Waxaa Habeenimadii Xalay dalka Southafrica gaar ahaan magaalada Capetown ka dhacay shir hordhac ah oo dhexmarray Boqor Burhan Boqor Muuse iyo qaar ka tirsan qoyska iyo caruurta Boqorka dalka Southafrica ee Zuluuga.
Boqor Burhan ayey booqasho ugu tageen Hoteelka uu magaalada ka degan yahay, iyagoo ahaa caruurta uu dhalay Boqorka SouthAfrica, iyo waliba nin u qaabilsan diimaha iyo dhaqanka xisbiga ANC.
Sidoo kale mid kamida caruurta Boqorka Southafrica oo isagu qaabilsan xiriirka iyo iskaashiga aqalka boqortooyada.
Boqor Burhan ayaa isla arbacada la kulmi doona Boqorka South-Africa saacada marka ay tahay 14:00 iyadoo kulanka labada Boqor uu ka dhici doono guriga weyn ee xarunta boqortooyada dalka South Africa.
Farriinta ugu weyn ee uu xambaarsan yahay boqor Burhan ayaa ah sidii loo nabad gelin lahaa sharafta, karaamada iyo ciziga umadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi oo si xun loola dhaqmayey muddooyinkii u dambeeyey.
Jaraaidka waaweyn ayaa lagu soo qorya in Boqor Burhan ku sugan yahay dalka SouthAfrica isagoo ah Boqor Soomaaliyeed oo si weyn uga xumaaday dhibta soo gaartay malaayiin Soomaali ah oo halkaasi lagu dhacay laguna dilay, inkastoo boqor Burhan intii uu joogay South-Africa ay aan wax dhib ah loo geysan Soomalida.